ဦးဇော်: မလေးရှားက ဘ၀တွေ
အိုဗာစတေးသမားများကို ပြန်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့အခါတိုင်း သူတို့ပြောပြတဲ့ သူတို့အကြောင်း တွေကို ဘယ်သူကကူနိုင်မှာမို့လို့လဲ။ မြန်မာလူမျိုးပီပီ ကံကိုယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး ဘ၀ပေးအခြေအနေ ပေါ့လို့ ပြောကြရင်း အထိတ်တလန့်နဲ့ပဲ နေ့တွေကို ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ပဲတခါဖမ်းပွဲလုပ်တိုင်း မလွတ်တဲ့လူက ထောင်ကျ ၊ အပြင်ကလူက အဲ့လူကို ပြန်ပို့ရင် ပြန်ပို့ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံရှာ ၊ မပြန်ပို့သေး...ရင်လည်း ထောင်ထဲမယ် စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်ရှာရသလို မြန်မာပြည်ကမိသားစုအတွက်လည်းရှာကြရပါတယ် ။ မလေးမှာ အိုဗာစတေးနဲ့နေသူအဖို့ရိုးနေတဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေပါ။ ဒီကြားထဲ “သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း” ဆိုသလို အလုပ်သွားရင်း ရဲနဲ့တွေ့လို့ကတော့ ၁ ပတ်စာ လုပ်အားခ ပြုတ်တဲ့အထိ သူတောင်းစားကြေးပေးကြရပါသေးတယ်
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် လကုန်လို့ပိုက်ဆံလွှဲကြရင် ဘယ်လေက်ပဲဒုက္ခရောက်နေကြပါစေ ….အိမ်နဲ့ဖုံးပြောကြတိုင်း မြန်မာပြည်က လူတွေကို နေကောင်းကြလား ။ ဘယ်သူက ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ယူ။ ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ပေး နဲ့ ပြောကြသလို သားသမီးရှိတဲ့မိဘတွေဆိုလည်း လိမ္မာအောင်နေနော်။ ကျောင်းမှန်မှန်တက် ၊ ကျူရှင်ရောတက်လား ၊ စာပေးပွဲဖြေနိုင်လား ။ အဖေကြီး (သို့)အမေကြီးကတော့ နောက်လ ဘာဝယ်ပေမယ်နော် စာကြိုးစားစသဖြင့် ပြောသံတွေကြားရသလို သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘတွေကို ပစ်ထားပြီး အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း အမေ ၊ အဖေ နေကောင်းလား ၊ ဆေးမှန်မှန်သောက်နော် ၊ သား\_သမီးတို့ အလုပ်ကောင်းပါတယ် ။ အဆင်ပြေပါတယ် . အဖေတို့အမေတို့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်၊ ပိုက်ဆံပို့ပေးပါ့မယ်စသဖြင့် စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောနေကြပေမယ့် ကိုယ်တိုင်မှာတော့
အဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ ဘယ်ချိန်အဖမ်းခံရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပါ.
အိုဗာစတေးအကိုတယောက်နဲ့သိလို့ သူ့ကိုဖမ်းတော့မှာ မပြန်ဘူးလားဆိုတော့ ဒီလိုနဲ့နေလာတာ ၇ နှစ်ရှိပါပြီညီမရယ် ။ ရှောင်ရင်း တိမ်းရင်းပေါ့ . အခု သူ့သမီးက GTC မှာ Civil နဲ့တက်နေတာ ။ ၁လကို ဘယ်လောက်ရှာပေးရတယ်ပေါ့ ။ သူ့သမီးလေး ကျောင်းပြီးရင်တော့ ပြန်မှာပါတဲ့လေ။ နောက် ကျောင်းကုန်းဘက်က ကလေးတယောက်ဆို အမရယ် မပြန်နိုင်ပါဘူး .. အိမ်မှာ အဖေ အမေက အသက်ကြီးပြီ။ ခုချိန်ဆို ရေကကြီး ၊ အလုပ်ကထင်သလောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး ။ ဘာပြောပြော ကျွန်တော် ၁ လတခါ ပို့တဲ့ပိုက်ဆံကို အဖေနဲ့အမေ က မှီခိုစားနေရတာပါ ဆိုတော့လည်း ဘာမှကိုပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး ။
အသိ အမတယောက်ဆိုရင်လည်း ကလေးကျောင်းပြီးရင်တော့ ပြန်မယ်ညီမရေ ပြောပြီး မိသားစုနဲ့တကွဲတပြား ရုန်းနေလေရဲ့……
အားလုံးသော မလေးရောက်မြန်မာများ ဘေးအပေါင်းမှ လွတ်ကင်းပါစေရှင်
https://www.facebook.com/pages/%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/197125167116060 မှ သိသမျှ ။